‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सुनिश्चित भएको छ’ - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सुनिश्चित भएको छ’
उपप्रधानमन्त्री महरा भन्छन्— नेपाल–चीन सम्बन्ध अझै विकसित हुन्छ
प्रम प्रचण्डका विशेषदूतका रुपमा बेइजिङ आइपुगेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सोङ ताओसँग भेट-वार्ता गरेका छन्। विशेष मिसन पुरा गरी बिहिबार बिहान काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री महरासँग बुधबार साँझ बेइजिङमा पूर्ण बस्नेतले गरेको वार्ता :
बेइजिङमा मैले नेपालको नयाँ सरकारप्रति चिनियाँ पक्ष एकदमै सकारात्मक रहेको पाएँ
नयाँ सरकार बने लगत्तै प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा चीन आउनु भयो, बेइजिङमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो?
दुवै छिमेकीलाई नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकारका प्राथमिकता जानकारी गराउने उद्देश्य अनुरुप म चीन आएँ, अर्को उपप्रधनमन्त्री भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै विकास गर्ने र थप सहयोगका क्षेत्रहरू खोजी गर्ने पनि यो भ्रमणको उद्देश्य थियो। चीनमा मैले मुख्यगरी तीन वटा उच्च भेटवार्ता गरेँ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र उपप्रमुखसँग भेट भयो । तीन वटै भेटवार्ता निकै सफल भएको मैले ठानेको छु। छलफल निकै सकारात्मक भयो ।
तपाईं त नेपालको नयाँ सरकारको तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सुनिश्चित गर्ने मिसन लिएर आउनु भएको थियो, त्यसमा सफल हुनुभयो?
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भ्रमणका निम्ति नेपालबाट पहिले पनि निम्ता आइसकेको हो । तर यसपटक मैले हाम्रा राष्ट्रपतिले चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति पठाउनु भएको निम्तो पत्र हस्तान्तरण गरेँ। परराष्ट्रमन्त्रीले निम्तो पत्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर छलफल गर्छौँ भन्नुभयो । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले मसँग दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘स्ट्याण्ड वाई’ राखेर भ्रमणको संयोजन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईं नेपालबाट जुन मिसन लिएर चीन आउनु भएको छ, त्यो सफल होस्’ भन्ने कामना पनि गर्नुभयो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुखसँग पनि राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे कुरा भयो । सबैबाट मैले असाध्यै सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ पाएको छु । तर नेपाल भ्रमणबारे राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफैले अन्तिम निर्णय गर्ने भएको हुनाले केही समयपछि मात्र ठोस निर्णय आउला ।
छोटो तयारीमै तपाईंले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्नु भयो, अन्य के के विषयमा छलफल भयो बेइजिङमा?
नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भयो । नेपालको नयाँ सरकारले चीनसँग पहिले भएका सहमती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दै सहयोगका नयाँ क्षेत्र खोजी गर्ने कुरा मैले राखेको छु। चिनियाँ पक्षबाट चीन–नेपाल सम्बन्ध र सहयोगलाई निरन्तर गर्ने मात्रै होइन, यसलाई अझै विकसित गर्न तयार छौँ भन्ने धारणा आएको छ। पार्टीगत रुपमा पनि दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध अझै विकसित गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा चिनियाँ पक्षबाट आएको । यस अर्थमा यो भ्रमण सफल भएको मैले ठानेको छु।
सरकार परिवर्तनका विषयमा नेपालमा विभिन्न चर्चा भएको छ, बेइजिङमा चाहीँ के पाउनु भयो?
सरकारको विषयमा चिनियाँ पक्षबाट खासै कुनै प्रतिक्रिया आएन । सरकार परिवर्तन तपाईंहरूको आन्तरिक मामिला हो, त्यसमा हाम्रो खासै चासो रहँदैन भन्ने चिनियाँ धारणा थियो। नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै चीनका प्रधानमन्त्री र पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुखले बधाई सन्देश पठाइसक्नु भएको छ । बेइजिङमा मैले नेपालको नयाँ सरकारप्रति चिनियाँ पक्ष एकदमै सकारात्मक रहेको पाएँ। नयाँ सरकारलाई के आवश्यक पर्छ चीन सहयोग गर्न तत्पर छ भन्ने कुरा सबै नेताहरूबाट आएको छ।
नेपाल–चीनबीच थप सहयोगका क्षेत्र खोजी गर्ने भन्नाले राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा नयाँ सम्झौताहरू हुन्छन्?
अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता यो सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भनेर हामीले नेपालमा भनेकै थियौँ । अरु संभावना के हुनसक्छ त्यसको खोजी गर्छौँ । नेपाल–चीनबीच थप सहयोगका क्षेत्रहरू खोजी गर्नेबारे चिनियाँ पक्ष पनि निकै सकारात्मक छ । त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र प्राविधिक तहमा चाँडै छलफल हुन्छ ।
काठमाडौँमा भर्खरै चर्चा भए जस्तै चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोर पनि छलफलको एउटा नयाँ क्षेत्र हो?
त्रिपक्षीय आर्थिक करिडोरप्रति चिनियाँ पक्ष पहिलादेखि नै सकारात्मक छ । हाम्रो अर्को उपप्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ र अहिले हामीले त्रिपक्षीय सहकार्यबारे नीतिगत र सैद्धान्तिक स्तरमा मात्र कुरा गरेका छौँ। ठोस कुरा हुन बाँकी नै छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणमा उठ्ने मुख्य विषय के के हुन्?
भ्रमणका एजेण्डा अहिले तपसिलमै छ। छलफल गर्न बाँकी नै छ । नयाँ सरकार बनेको सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा आमन्त्रण गर्ने, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको जानकारी गराउने तथा सहयोगका नयाँ क्षेत्रमा नीतिगत बोध गराउने मात्र हो अहिलेको मेरो भ्रमणको उद्देश्य।
तपाईंको भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने चाहीँ सुनिश्चित भएको हो?
चिनियाँ नेताहरू राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणप्रति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ। मेलै त अब राष्ट्रपतिको भ्रमण लगभग सुनिश्चित नै ठानेको छु । चिनियाँ पक्षले केही समयपछि निर्णय लिनुहुन्छ यसबारे ।
अन्तमा, तपाईं धेरै पटक चीन आइसक्नु भयो, पहिला पहिलाका भ्रमण र यसपटकको भ्रमणमा के फरक महशुस गर्नुभयो?
पहिला पनि म सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा चीन भ्रमणमा आएको थिएँ । पहिला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दुई–तीन पटक सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा चीन आएको थिएँ । त्यसपछि पार्टी प्रतिनिधिको रुपमा आएँ । अरु नीजि भ्रमण पनि गरेँ । यसपटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा आउँदा उच्चस्तरको भ्रमणको अनुभूती गरेको छु र चिनियाँ पक्षले पनि त्यही उचाईमा महत्व दिएको ठानेको छु ।
प्रकाशित १ भदौ २०७३, बुधबार | 2016-08-17 23:25:21